घर / भान्साको नल / भाँडो फिलर किचेन faucets / WOWOW पटा फिलर नल स्टोभ क्रोम माथि छ
भान्सा स्टोभ पट्ट फिलर नल सुविधाहरू 304०XNUMX स्टेनलेस स्टिल नल शरीर, उच्च गुणस्तरको एररेटर, एक-ह्यान्डल स्विच संचालन गर्न सजिलो छ, पूर्ण तौलले कुनाहरू काट्न अस्वीकार गर्‍यो, सम्पूर्ण सामानहरू
2311200C स्थापना निर्देशन
क्रोम पट भरिने ट्याप 2311200C
जब तपाईं आफ्नो ब्रान्डको नयाँ किचन डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ, यो ठूलो छ कि तपाईं यसलाई स्क्र्याचबाट पूर्ण रूपमा डिजाइन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं आफूले चाहेको सबै प्रकार्यहरू बारे सोच्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको भान्साको अनुभवलाई उत्तम बनाउनु आवश्यक छ। भान्सा घर अधिकांश परिवारहरूको लागि यो ठाउँ हो जहाँ तपाईं घरमा धेरै समय बिताउनुहुन्छ। त्यसोभए तपाईं आफैंले र तपाईंको परिवारको सपनाको किचन डिजाइन गर्नुहुन्छ जुन तपाईंको सबै आवश्यकताहरू र ईच्छा पूरा गर्दछ। जब तपाइँ स्क्र्याचबाट किचन डिजाईन गर्नुहुन्छ, महान कुरा के हो भने तपाई वास्तवमै केहि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कतै सीमाहरू छन्। ठीक छ, बजेट बुद्धिमानी हुन सक्छ। धेरै चोटि तपाईं आफ्नो सपनाको किचन डिजाइन गर्नुहुन्छ, र मूल्य र तपाईंको वास्तविक बजेटमा निर्भर गर्दै, तपाईं वस्तुहरू बनाउनको लागि समायोजन गर्न सुरू गर्नुहुन्छ
यो तपाइँको बजेट को लागी फिट छ। प्रश्न यो छ कि यो तपाइँको बजेट को लागी कसरी फिट गर्ने। तपाई आइटममा डाउनग्रेड गर्न चाहनुहुन्न जुन तपाईलाई सब भन्दा महत्त्वपूर्ण छ। सामग्री र तपाईंको भान्छाको फिनिशको सन्दर्भमा, मूल्यको हिसाबले त्यहाँ ठूलो अन्तर हुन सक्छ। जब तपाईं विकल्पको बीचमा भिन्नताहरूलाई हेर्नुहुन्छ, तिनीहरू कहिलेकाँही सायद कडाईले याद गर्छन्। यस तरिकाले तपाईं चलाखीपूर्वक चलाउन सक्नुहुनेछ। अर्कोतर्फ तपाईंले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भान्छाको उपकरणको गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु हुँदैन। त्यसोभए अन्तमा सस्तो महँगो हुन सक्छ। त्यो हुनु पर्छ र जहिले पनि जोगिन सकिन्छ। तपाईंले भर्खरै आपूर्तिकर्ता खोज्नुपर्नेछ जुन तपाईंलाई पैसाको लागि उत्तम मान पुर्‍याउन सक्छ। WOWOW त्यो आपूर्तिकर्ता हो!
कार्यात्मक क्रोम पॉट भरने ट्याप
भाँडा भर्ने ट्याप निश्चित रूपमा तपाईको भान्साकोठामा कार्यक्षमता हो जुन तपाइँको भान्साको जीवन अझ सजिलो बनाउन सक्दछ। धेरै व्यक्तिसँग यस प्रकारको भान्छा उपकरणहरू छैनन्, जसको उपयोग अझ व्यापक छैन। यद्यपि यसले तपाईंको भान्छाकोठामा ठूलो फाइदा पुर्‍याउँछ र तपाईंलाई भारी सामानहरू बोक्न लगाउँदैन पानी जस्तो भाँडामा। WOWOW को क्रोम पट भर्न ट्यापको साथ तपाईं आफ्नो भाँडामा पानी भर्न सक्नुहुन्छ तिनीहरू पहिले नै स्टोभमा हुँदा। यस तरिकाले तपाईंले यी भाँडोहरू पानीको फोकामा भान्साको डु to्गाबाट चुल्हामा बोक्नु पर्दैन। विशेष गरी जब तपाईंसँग कमजोर हात वा हातहरू छन्, वा केवल शक्तिको अभाव छ, यो क्रोम भाँडो भरिने ट्यापले तपाईंको जीवन यति सजिलो बनाउन सक्छ।
क्रोम पट भर्न ट्यापको साथ तपाईं पानी भाँडाहरू भर्न सक्नुहुनेछ तिनीहरू भान्साको चुलोमा हुँदा। केही फरक पर्दैन यदि आगो पहिले नै चालु छ, वा यदि भाँडाका भाँडाहरू पकाउँदै र पकाउँदै छन् भने। क्रोम भाँडो भरने ट्याप उच्च? गुणस्तरको धातुहरूले बनेको हुनाले, यसले सजिलै तापको प्रतिरोध गर्न सक्दछ। तसर्थ यो क्रोम पट भर्न ट्याप धेरै कार्यशील छ र तपाईंको भान्साको लागि एक अद्भुत अतिरिक्त
पैसा क्रोम पट भर्न ट्याप को लागी मान
माथि उल्लेख गरिए अनुसार WOWOW ले तपाईंलाई बजारमा प्राप्त गर्न सक्ने उत्तम मूल्यको प्रस्ताव गर्दछ। यो अचम्मको क्रोम पट भरिने ट्यापले निश्चित रूपमा कुनै पनि A- ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ किनकि यसले समान वा अझ राम्रो गुणस्तरको प्रस्ताव गर्दछ, र अझै यो सस्तो मूल्यमा प्रस्ताव गरिएको छ। A- ब्रान्ड क्रोम पट भरिने ट्यापको मूल्य तीन गुणा वा बढी महँगो हुन सक्छ। WOWOW ले बारम्बार देखाउँदछ कि यी प्रकारका मूल्यहरू आवश्यक छैन। त्यसकारण WOWOW ले तपाईंलाई यो क्रोम पट भर्न ट्यापको साथ पैसाको लागि उत्तम मान प्रदान गर्दछ। कुनै शंका छैन!
WOWOW को क्रोम पट भर्न ट्यापको गुणवत्ता अनचेन्लीज छ। अन्तिम स्थानमा छैन किनकि WOWOW ले स्टेनलेस स्टील र उच्च-गुणको क्रोम फिनिश जस्ता उच्च? गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गर्दछ। तपाईं तुरुन्त गुणवत्ता देख्नुहुन्छ। O० ओज भन्दा कमको भारको साथ तपाईलाई लाग्छ कि यो ठोस धातुबाट बनेको छ। यस क्रोम भाँडो भरिने ट्याप धेरै वर्षको लागि प्रतिरोध गर्दछ, र तपाईं पनि यस क्रोम पट भर्न ट्याप को एक परेशानी रहित लगातार प्रदर्शनबाट लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। क्रोम पट भर्न ट्याप पनि निओपरल एरेटरले सुसज्जित छ। यसले निरन्तर दबाव र स्थिर पानी प्रवाह प्रदान गर्दछ। एरेटरले थोरै छ्याप्ने ग्यारेन्टी गर्दछ, र एक ड्रिप मुक्त र चुहावट प्रूफ पानी अनुभव।
क्रोम पट भरिने ट्यापमा पुग्नुहोस्
यो क्रोम पट भर्न ट्याप बुद्धिमानीपूर्वक तपाईको भान्छा सजावटमा कुनै आवश्यक ठाउँ लिनको लागि डिजाइन गरिएको थियो। यस स्ट्यारेक्बल क्रोम पोट भरी ट्याप मोडी, तपाईं स्टोभ पछाडिको पर्खाल बिरुद्द सजीलो भण्डार गर्न सक्नुहुनेछ। क्रोम पट भर्न ट्यापसँग डुअल-साइड स्वीड आर्म छ। यस तरीकाले यो न्यूनतम भण्डार गर्न सकिन्छ, र अझै लामो टाढा हुन्छ जब यो पूर्ण तानिन्छ। पर्खालबाट यसको अधिकतम २ inches इन्चको तानोको साथ, तपाईं वास्तवमै तपाईंको भान्छा स्टोभको प्रत्येक कुनामा पुग्न सक्नुहुनेछ।
दुई ह्यान्डलहरूको साथ तपाईं क्रोम पट भरिने ट्यापलाई सजिलोसँग सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्न। यसले अतिरिक्त सुरक्षा पनि प्रदान गर्दछ, किनकि केहि व्यक्तिहरू यस प्रकारको ट्यापहरूदेखि डराउँछन्। त्यहाँ सि s्क नभएकोले खन्याइएको पानी चुलोमा चुहिन सक्छ। तपाईं यो क्रोम पट फाइलिंग ट्याप पर्खालको नजिक, मास्टर भल्भको साथ बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईं स्पउटमा भल्भको साथ साथै यसलाई बन्द गर्न सक्नुहुनेछ। यसले स्थिर स्ट्रिमको ग्यारेन्टी गर्दछ जुन निश्चित रूपमा यसको उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्दछ। यो डबल सुरक्षा अधिकतम सुरक्षा प्रदान गर्दछ। जब तपाईं क्रोम पट भर्न ट्याप प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं केवल मास्टर भल्भ खोल्नुहुन्छ, र तपाईं यो क्रोम पट भर्न टेप कुनै अन्य किचन ट्याप जस्तै सञ्चालन गर्नुहुन्छ।
स्टाइलिश क्रोम पट भरिने ट्याप
स्टाइलिश क्रोम परिष्करणको कारण, यस क्रोम पट फाइलिंग ट्यापले तपाईंको भान्साको शैलीमा उत्कृष्ट थप प्रदान गर्दछ। यसले तपाईंको भाँडो भरिने ट्यापमा एक उच्च चिंतनशील र चमकदार कोटिंग फिचर गर्दछ। 304०5 स्टेनलेस स्टीलको शरीरको साथ संयोजनमा, यो क्रोम पट भर्न ट्यापले तपाईंको भान्छाको शैलीमा नाटकीय प्रभाव दिन्छ। यस बाहेक, यो क्रोम पट भर्न ट्याप गैर-क्षरण हो र वर्षौंसम्म सुरुचिपूर्ण र सुन्दर रहन्छ। कुनै चीजको लागि होईन WOWOW ले तपाईंलाई यस क्रोम पट भर्न ट्यापमा-बर्षे वारंटी अवधि प्रदान गर्दछ। यसले प्रमाणित गर्दछ कि WOWOW यसको उत्पादनको बारे मा विश्वस्त छ, र पैसाको मूल्य जुन तपाईं यससँग पाउँदै हुनुहुन्छ। संक्षेपमा क्रोम पोट भरी ट्यापका फाइदाहरू:
Ract व्यावहारिक भाँडा भरने ट्याप
High उच्च गुणवत्ता क्रोम समाप्तको साथ आधुनिक डिजाइन
• खिया नलाग्ने
। डबल भल्भहरू
D दोहरो स्विंग हतियारको साथ अधिकतम पहुँच
SKU: 2311200 XNUMX१C विभाग: भान्साको नल, भाँडो फिलर किचेन faucets टैग: क्रोम समाप्त, भान्सा सिink्क नल, पर्खाल माउन्ट
२.1.71 केजी = 3.7699२० एलबी = .60.3185 १..XNUMX११२XNUMX ओज
15.5 x 9.7 x 2.1 इन्च
फोल्डि / / २ ह्यान्डल / स्विंग आर्म
तह चक्कु आकार
वाणिज्यिक / रेस्टुरेन्ट / आवासीय / भित्री / भान्छा
वाह एकल-ह्यान्डल पुल-आउट स्प्रेयर किचन फा ...